Untogether (2018) | MM Movie Store
ဒီကားက စာရေးဆရာမနဲ့ ဂြာနယျလဈဖွဈတဲ့Emme Forrestရဲ့ ကိုယျတိုငျးရေး ကိုယျတိုငျရိုကျတဲ့ပှဲဦးထှကျကားပါ။ဇာတျလမျးကတော့ နညျးနညျးဆနျးပွားတဲ့ဘဝလေးခုအကွောငျးပါ။စာရေးတဲ့အလုပျမှာ တကယျပါရမီပါတဲ့စာအုပျတဈအုပျထုတျထားပွီး အဆိုပါစာအုပျကိုဘာသာပေါငျးမြားစှာ ပွနျဆိုခံထားရတဲ့စာရေးဆရာမတဈယောကျရယျ…
သူ့ ကိုယျတှဖွေ့ဈရပျကို ဇာတျလမျးရေးရငျးBest sellerဖွဈသှားတဲ့ ဆရာဝနျတဈယောကျရယျရဲ့အခဈြဇာတျလမျးနဲ့….ရော့ချကာဟောငျး ဆေးသုတျသမားလုပျနတေဲ့လူလတျပိုငျး လူအိုတဈယောကျရယျ…
၂၃နှဈအရှယျဂြူးဘာသာရေးသကျဝငျယုံကွညျတဲ့Beauty Spa မှာအလုပျလုပျတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျရယျရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတို့ကိုဇာတျကောငျမြားကွားက Chemistryကို
အဖွဈအပကျြအခြို့အကွောငျးကိုမရိုးရှငျးလှတဲ့ဇာတျအိမျဆနျးဆနျးကလေးထဲဆနျးဆနျးပွားပွား Dialougeတှနေဲ့ ပဈထညျ့သှားပါတယျ။ကြှနျတျောတို့မဟုတျတဲ့ လူတှရေဲ့အကွောငျးဘဝတှရေဲ့အကွောငျး အခဈြဇာတျလမျးတှအေကွောငျးကိုခံစားခကျြမြားစှာအတှကျ…. ခံစားကွညျ့မယျဆိုရငျခံစားလို့ကောငျးမဲ့ Dramaကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ။
Fifty Shades ကားတှရေဲ့ Lead ActorJamie Donanကိုသုံးထားတဲ့အပွငျဒီကားထဲက Main Cast ညီအမကိုလညျးတကယျ့ဘဝမှာ ညီအဈမအရငျးတှဖွေဈတဲ့Lola and Jemima Kirkeတို့ကိုသုံးထားပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျရဲ့ ဇာတျညှနျးနဲ့ဒါရိုကျတာဖွဈတဲ့Emma Forrestဟာ ဂီတဂြာနယျလဈဖွဈတဲ့အတှကျဒီကားမှာ သီခငျြးမြားစှာ ဂီတအဖှဲ့မြားစှာကိုRefယူထားတဲ့အပွငျ သီခငျြးမြားစှာကိုသုံးထားပါတယျ။R rateဖွဈတဲ့အတှကျ Eroticအခနျး အနညျးငယျပါပါမယျ။
ဒီကားက စာရေးဆရာမနဲ့ ဂျာနယ်လစ်ဖြစ်တဲ့Emme Forrestရဲ့ ကိုယ်တိုင်းရေး ကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့ပွဲဦးထွက်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းကတော့ နည်းနည်းဆန်းပြားတဲ့ဘဝလေးခုအကြောင်းပါ။စာရေးတဲ့အလုပ်မှာ တကယ်ပါရမီပါတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ထားပြီး အဆိုပါစာအုပ်ကိုဘာသာပေါင်းများစွာ ပြန်ဆိုခံထားရတဲ့စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ရယ်…
သူ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကို ဇာတ်လမ်းရေးရင်းBest sellerဖြစ်သွားတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရယ်ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့….ရော့ခ်ကာဟောင်း ဆေးသုတ်သမားလုပ်နေတဲ့လူလတ်ပိုင်း လူအိုတစ်ယောက်ရယ်…
၂၃နှစ်အရွယ်ဂျူးဘာသာရေးသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့Beauty Spa မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတို့ကိုဇာတ်ကောင်များကြားက Chemistryကို
အဖြစ်အပျက်အချို့အကြောင်းကိုမရိုးရှင်းလှတဲ့ဇာတ်အိမ်ဆန်းဆန်းကလေးထဲဆန်းဆန်းပြားပြား Dialougeတွေနဲ့ ပစ်ထည့်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တဲ့ လူတွေရဲ့အကြောင်းဘဝတွေရဲ့အကြောင်း အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းကိုခံစားချက်များစွာအတွက်…. ခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခံစားလို့ကောင်းမဲ့ Dramaကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Fifty Shades ကားတွေရဲ့ Lead ActorJamie Donanကိုသုံးထားတဲ့အပြင်ဒီကားထဲက Main Cast ညီအမကိုလည်းတကယ့်ဘဝမှာ ညီအစ်မအရင်းတွေဖြစ်တဲ့Lola and Jemima Kirkeတို့ကိုသုံးထားပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့Emma Forrestဟာ ဂီတဂျာနယ်လစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားမှာ သီချင်းများစွာ ဂီတအဖွဲ့များစွာကိုRefယူထားတဲ့အပြင် သီချင်းများစွာကိုသုံးထားပါတယ်။R rateဖြစ်တဲ့အတွက် Eroticအခန်း အနည်းငယ်ပါပါမယ်။